Ahoana no hatao raha voasakana indray ilay orana? Aza maika! Ampiasao handrahoana ... Fahagagana! Faingana hilazana ny mpanjifanao!
Home / Blog / Ahoana no hatao raha voasakana indray ilay orana? Aza maika! Ampiasao handrahoana… Fahagagana! Faingana hilazana ny mpanjifanao!
Ahoana no hatao raha voasakana indray ilay orana? Aza maika! Ampiasao handrahoana… Fahagagana! Faingana hilazana ny mpanjifanao!
2021 / 01 / 11 FisokajianaBlog 1151 0
Sekoly fandraharahana amin'ny trano fidiovana 2020-11-24
Shower, ampiasaintsika isan'andro. Saingy hitanao ve fa ny fandroana ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra dia feno teboka mavo mizana? Tsy hoe maloto be io fa misy fiatraikany amin'ny rano mivoaka avy ao amin'ny douche. Na hamafana ravina na borosy, aorian'ny ezaka be dia be, dia sarotra diovina ihany ny mizana. Amin'izao fotoana izao, inona no hatao? Aza maika! Ny zazavavy fandroana manaraka dia mampianatra anao fomba vitsivitsy ~
Voasakana ny lohan'ny fandroana, ny tetika famahana.
Ny lohan'ny fandroana dia ho sakana aorian'ny fampiasana maharitra. Tena voajanahary izany. Tsy midika izany fa vaky ny lohan'ny fandroana, aza manahy, tena tsy ilaina mihitsy ny mividy vaovao. Izany dia tena vokatry ny limescale izay mitranga aorian'ny famoahana rano maharitra. Mila esorinao fotsiny ny lohan'ny fandroana ho an'ny fanadiovana.
1 、 Rehefa ela ny fivoahan'ny rano dia sarotra ny mivoaka avy ao amin'ny lavaka fivoahana ireo zavatra goavambe sasany ao anaty fantsom-pidirana na rano fisotro, ary ho mora ny manakana ny lavaka fivoahana. Esory ny lohan'ny fandroana ary ahintsano moramora ny fidiran'ny rano mankany ambany handraraka ny fako ao anatiny. Mitandrema mba hamonjy ny kojakoja rehefa esorina ny nozoro.
2, mifidiana kaontenera iray izay afaka mametraka ny nozatra, mandraraka vinaingitra fotsy, mpanadio vilia fidiovana na mpanadio limeszy manokana, asidra malemy. Atsofohy ao anaty faran'ny rano milentika mandritra ny fotoana fohy ny noza (mety ny adiny 1), mampiasa borosy nify kely na borosy madio hafa mba hamafana, ary avy eo apetrakao ny rano mba hosasana.
3, aorian'ny famafana ny rano dia esory amin'ny tatatra manodidina ny lavaka misy ny rano sy ny ambonin'ny refy. Hihaona amin'ireo petra-bola "mafy loha" kokoa, aza mampiasa fanjaitra. Esory amin'ny rantsan-tànana mandra-pialany, ary avy eo diovina amin'ny feta.
Fomba fikojakojana ny fandroana
1, ny fampiasana ny maripana manodidina dia tsy tokony hihoatra ny 70 degre Celsius. Ny hafanana avo sy ny hazavana ultraviolet dia hanafaingana ny fahanteran'ny fandroana, hanafohezana ny androm-piainan'ny fandroana, noho izany ny fametrahana ny fandroana lavitra araka izay azo atao avy amin'ny fandroana sy ireo loharano hafanana hafa. Ny shower dia tsy azo apetraka ao amin'ny bara fandroana mivantana etsy ambany, ary ny halavirana dia tokony ho mihoatra ny 60CM.
2, eo amin'ny sehatry ny kalitaon'ny rano mafy, azafady manandrama mampiasa ny fandroana miaraka amin'ny potika vita amin'ny fingotra na amin'ny fitaovana madio mahitsy. Na voahitsaka amin'ny ambaratonga aza ny lavaka fivoahan'ny fandroana dia mora kokoa ny diovina. Aza adino ny tsy manala an-kery ny fandroana. Noho ny firafitry ny fandroana anatiny, ny fanesorana an-keriny tsy matihanina dia hitarika amin'ny fandroana tsy azo averina amin'ny toetrany voalohany.
3, sokafy ary akatona ny faucet mandro ary amboary ny fomba fandroana rano tsy tery mafy, ahodino moramora ny homeopath. Na ny faucet nentim-paharazana aza, tsy mila mandany hery be ihany koa. Tandremo manokana fa tsy ny tahon'ny faucet, bracket amin'ny fandroana ho toy ny fantsom-pifandraisana hanohanana na hampiasaina.
4, fantsom-by vy fandroana tokony tazonina anaty fanjakana voajanahary, aza afangaro amin'ny faucet izany rehefa tsy ampiasaina. Mandritra izany fotoana izany dia tandremo ny fiarahan'ny fantsona sy ny fantsona tsy hamorona faran'ny maty, mba tsy hanorotoroana na hanimbana ny fantsana.
5, isaky ny enim-bolana na latsaky ny fandroana dia hesorina ary hapetraka ao anaty koveta kely. Araraka ary atsofohy amin'ny vinaingitra fotsy azo hanina mandritra ny 4-6 ora ny velarana sy ao anaty fandroana, avy eo kosaho moramora ny tampon'ny fandroana amin'ny fofona vita amin'ny landihazo. Ampidiro indray ny mpampifandray ary ampitao rano vetivety, ary miandry ny vinaingitra fotsy sy ny refiny hivoaka miaraka amin'ny rano, mba hanafoanana na hampihenana ny fiantraikan'ny mizana amin'ny fandroana, ary mety hitondra vokam-panamahana.
Torohevitra fanadiovana amin'ny fandroana
1, ny fantsona fandroana mitaingina rindrina dia mazàna malaza kokoa, koa mitandrema sao mikapoka na manindry azy rehefa mametraka zavatra ianao. Aza mifandray amin'ny peratra sy zavatra mafy hafa araka izay azo atao mba hisorohana ny ratra mahafaty.
2, ny teknika fanadiovana tsara dia ny manasa ny faucet amin'ny rano, ary avy eo hamafa ny rano rehetra amin'ny metaly ambonin'ilay faucet amin'ny lamba landihazo malefaka, satria ny rano dia hamorona ambaratonga ambonin'ilay vy aorian'ny etona. Fafao moramora, aza kosehina mafy. Maina amin'ny spaonjy mando sy hoditra malefaka, afaka mampamirapiratra sy mamirapiratra ny faucet.
3, toy ny filàna asa fanadiovana be dia be, tsara kokoa ny mampiasa fanadiovan-dranon-dronono malefaka, na tsy asidra, ranoka malemy tsy manosotra ary vovoka simba tanteraka, ny poleta vahaolana tsy misy fikorontanana dia afaka manala ny faucet amin'ny sarontava mivaingana sy fananganana. Aza mampiasa fanadiovana mahery vaika, lamba na lamba vita amin'ny taratasy, na mpanadio misy asidra, na fako poloney na fanadiovana mahery vaika. Rehefa vita ny fanadiovana dia esory amin'ny rano ny detérger rehetra ary maina miaraka amin'ny lamba landy malefaka.
Previous :: Azo havaozina ny trano fidiovana !!! Ny trano fandroana dia ho fantatry ny olona Next: Mamolavola ny fandroana ao an-trano mba ho tsara tarehy ary hanana endrika tsara ao anaty fandroana isan'andro
2020 / 12 / 12 4642